Garyaqaanada, xuquuqda aadamaha & aqoonyahanada oo ka haldey dilka Bin Ladin – SBC
Garyaqaanada, xuquuqda aadamaha & aqoonyahanada oo ka haldey dilka Bin Ladin
Garyaqaanada, U doodayasha xuquuqda aadamaha & aqoonyahanada oo ka haldey dilka Osama Bin Ladin
Pakistan oo muujisay dareenka sharci ahaanshaha weerarka dilka Bin Ladin
Xoghayaha arimaha dibada Pakistan Salman Bashir ayaa daboolka ka qaaday dareenka wadankiisa ee ku aadan shari ahaanshaha weerarka lagu diley Osama Bin ladin.
Isagoo soo xiganeyey diyaarinta document golaha amaanka Qaramada Midoobay ay u dirayso Pakistan wuxuu yiri “Waxaa jira su’aalo sharci oo la xiriira xeerka qaramada Midoobay, cid waliba waxay xaq u leedahay si buuxda ilaalinta qawaaniinta caalamiga ah” ayuu ku yiri shir saxaafadeed uu ku qabtey magaalada Islamabad Salman Bashir.
Xoghayaha arimaha dibada Pakistan wuxuu sheegay in jabinta ama ku xadgudubka madaxbanaaniada iyo dhaqdhaqaaqyada la dagaalanka argagixisada waxay sare u qaadanaan su’aalaha ku aadan sharciyada & iyo hoos u dhaca niyada bulshada caalamka”.
Diblumaasiyiinta ayaa sheegaya Pakistan waxaa soo foodsaaray walwal cusub oo ah in Hindiya ay ka geysato gudaha Pakistan weeraro la mid ah kan Mareykanka uu sheegay in uu ku diley Osama taasi oo ah in Hindiya ay ugaarsan karto dadka ay ku tuhmayso falalka argagixiso ee ka dhaca dalkeeda sida weerarkii Mumbai oo Hindiya ay aaminsan tahay dad ka qayb qaatey ay ku sugan yihiin Pakistaan.
Gudiga Laanqayrta Cas ee caalamiga ah Committee of the Red Cross (ICRC)
Afhayeen u hadley gudiga caalamiga ah ee Laanqayrta Cas ee loo yaqaan ICRC ayaa ka sheegay magaalada Geneva ee xarunta ururkaasi inaanay haysan ogolaansho ilaa iyo xad oo la xiriira dhinac gargaar ama sharci oo arinkank ku aadan.
“Hadii aynu helo wax arinkan ku aadan waxaan si qarsoodi ah ugala hadli doonna Washington” ayuu yiri afhayeenka ICRC.
Gudiga xuduuqda aadamaha ee qaramada Midoobey (UN’s High Commissioner for Human Rights,)
Navi Pillay oo ka mid ah gudiga sare ee xuquuqda aadamaha ee qaradama Midoobay wuxuu sheegay in uu ku baaqayo in la keeno faahfaahin cad oo la xiriirta go’aanka sharciyeynta dilka Osama Bin Ladin hogaamiyaha Al-qaacida.
Horaantii todobaadkan baare madaxbanaan oo ka tirsan qaramada midoobay oo lagu magacaabo Christof Heyns, ayaa sheegay in ay jirto muran ku aadan sharci ahaanshaha ku gadaaman hawlgalada hubaysan ee ka dhacay Pakistan ee ka dhanka ah Al-qaacida.
Nick Grief, oo ah qareen caalami ah ka tirsan jaamacada Kent ee wadanka Ingiriiska wuxuu ka hadley sharci ahaanshaha weerarka Bin Ladin wuxuuna yiri “Weerarku wuxuu u muuqanaya mid dilka ka baxsan sharciga, iyadoon loo marin hab sharci ah, waxay aheyd mucquul in nolol lagu qabto, laakiin qofna kama wayna xayndaabka badbaada sharciga, ka soo qaad xitaa dagaalkii labaad ee aduunka madaxdii Nazi-ga waxaa la siiyey garsoor caadil ah intii aan lagu qaadin ciqaabta dambiyada dagaal”.
Sharci ahaanshaha dilka Bin Ladin wuxuu madaxda Mareykanka ku keenay in ay tiro ka dhawr jeer si isqilaafsan uga hadlaan iyadoo markii hore Madaxweyne Obama markii uu ku dhawaaqayey in la diley Osama Bin Ladin uu sheegay in uu hubaysnaa oo uu watey qori AK 47 ah isla markaana la toogtey isagoo qorigaasi kula dagaalamaya ciidamada oo waliba gabaad ka dhigtey xaaskiisa.
Maalin ka dib sarkaalka warfaafinta u qaabilsan aqalka cad Jay Carney wuxuu sheegay in Osama la dilay isagoo aan hubeysneyn oo ku dhex sugan qolkiisa jiifka, taasi oo keentey caro badan oo ka timid hogaamiyeyaasha diinta & kooxaha xuquqda aadamaha.
Mareykanka waxay horey u sheegeen in ay dagaal kula jiraan Al-Qaacida waxaana taasi u noqonaysaa qiil ku aadan inay la dagaalamayaan ciidan hubaysan, sida uu qabo Steven Ratner oo ah oo ah professor ka tirsan jaamacada sharciyada ee University of Michigan law school wuxu sheegayaa in ay ku xiran tahay hadba sida loo rumeysto in Osama Bin Ladin uu dagaal ku jirey iyo in uu ahaa laga shaki qabe in uu geystey xasuuq.
“Hadii Osama uu hubeysnaa waa meesheeda, laakiin hadii aanu haysan iyo hadii kaleba waxay aheyd sharci dilka hawlgal dagaalka, sida ay sheegayaan saraakiisha aqalka Cad oo ahaa in qolka Bin Ladin ku jirey ay yaaleen laba qori”
David Scheffer, oo ka tirsan Jaamacada Northwestern University school of law, wuxuu sheegayaa in Bin Ladin sanadkii 1998-kii Maxkamada Manhattan ay ku eedeysay dambiga ah inuu maleegay weerar ka dhan difaaca Mareykanka, “Caadiyan hadii qofka lagu eedeyo dambi sharciyan waa in la qabtaa oo la horkeenaa maxkamad oo lagu qadaa eedeynta lagu soo oogay, balse ma ahan in la dilo, marka waxaa lagu xalin karaa arinkan waa in la helo xogta ay bixiyeen ciidamadii hawlgalkaasi fuliyey ee US Navy Seal gaar ahaan inay keenaan cadeynta ah inay qabtaan ama uu isa soo dhiibo”.